အမျိုးသားအဆင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်း | FLEGT
အမျိုးသားအဆင့် အရပ်ဖက်လူမှု အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) အားဆွေးနွေးရန် အလွှာစုံပါ၀င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးပါ၀င်ပြီး မတူညီသောအကျိုးရလဒ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်သည့် အချိန်ကာလကန့်သတ်၍ ငှားခြင်း၊ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်၊ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှု၊ အခွင့်အရေးများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးစသည်တို့တွင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အများစုသည် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော်လည်း အခြားအဖွဲ့များသည် လုပ်အားပေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မူလနေထိုင်ခဲ့သောလူမျိုးနွယ်စုများ၊ ယုံကြည်မှုပေါ်အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား သမဂ္ဂများဖြစ်နိုင်သည်။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များအတွင်း ပြဿနာများတွင် ပူပေါင်းပါ၀င်မှုများ၊ ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်မှုများကို တင်ပြခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးမှု အခြေအနေများစသည့် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းများ ကွာခြားသည်။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်သတင်းအချက်အလက်များရယူရန်နှင့် အပြည့်အဝပါဝင်ရန်တို့အတွက် သင်တန်း သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေလိုအပ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာအစိုးရ မဟုတ် သည့်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်၊ သို့မဟုတ် အလှူရှင်အေဂျင်စီများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းများသည် ဒေသခံအဖွဲ့များ ပါဝင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများစီစဉ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်စိတ်များကို နားထောင်ပေး ခြင်းတို့တွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။
အချို့နိုင်ငံများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့် အခြားအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ သည် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များ၏ အကျိုးကိုကူညီ စုစည်းပြီး မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
သို့ရာတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ အဖွဲ့ဝင် အားလုံး ၏ အကျိုးကိုဆွဲဆောင်ပြီး တစ်သံတည်းဖြင့်ဆက်သွယ်မည့် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ပုံဖော်ဆောင်ရေးပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အဖွဲ့ဝင်များသည် မတူညီသော အမြင်နှင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသော ဉီးစားပေးမှုများရှိနေသော်လည်း အရေးကြီးသောကိစ္စ ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အများဆန္ဒရရှိရမည်။
မူလနေထိုင်ခဲ့သောလူမျိုးနွယ်စုများကဲ့သို့ အချို့အဖွဲ့များသည် ကျယ်ပြန့်သော အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မည့်လမ်းကြောင်းများထက် ၎င်းတို့ဖာသာ လမ်းကြောင်းဖန်တီးချင်သည်။
ရှုမြင်ချက်။ Elijah Danso ၏ VPA သည် ဂါနာတွင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသလဲ။
"အစပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် FLEGT ကို ယှဉ်ပြိုင်အဆိုပြုခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်းနှင့် လယ်သမားတွေကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ သစ်တောပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပြောင်းလဲ ပေးခြင်းစတဲ့ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုအပေါ်အကျိုးသက် ရောက်စေမဲ့အလား အလာတစ်ခုလို့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသအဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့ အာဏာ (Power) လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ VPA က ဒါကိုမပေးနိုင်ရင် ဒါဟာကျရှုံးခြင်းတစ်ခုပါပဲ။"
Elijah Danso ဂါနာတွင် လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်နှင့် သစ်တောရေးရာအကြံပေးဖြစ်သည် / Source: Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN. 24pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများပါ၀င်မှုများ၏ ဥပမာများ
ဂါနာ။ ဂါနာနိုင်ငံတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် အစိုးရမှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်သဘော ထားပြောင်းလဲလာခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကောင်းများကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် VPA စတင် ချိန်တွင် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၃၅ ဖွဲ့ကျော်ပူးပေါင်းထားသည့် ဂါနာသစ်တော စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် VPA ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပေ။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များမှ အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်တင်ပြလာသည့်အခါ ကော်မတီ တွင် ပါဝင်ရန် ဂါနာသစ်တောစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုအစိုးရမှဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ပါဝင်ခြင်း ကိုကျယ်ပြန့်စေရန် ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့များ၊ ရိုးရာဓလေ့ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ သမဂ္ဂများ၊ မီဒီယာ နှင့် သုတေသနအဖွဲ့များကို ပူးပေါင်း၍ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဤအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်သည် ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
ဦးဆောင်ကော်မတီသည် မူဝါဒကော်မတီတစ်ခုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့များကိုလည်းဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် စံနှုန်းများ၊ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက် စည်းမျဉ်းများနှင့် သစ်လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲပါစာသားများကို မူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ သည် ၎င်းအဖွဲ့များအားလုံးတွင် ကိုယ်စားပြုခွင့်ရခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများမစတင်မှီ အင်ဒိုနီးရှားတရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ထွက်ပေါ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် မှစ၍ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းများသည် အမျိုးသား အဆင့် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့် အဖွဲ့နှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များတွင် ကိုယ်စားပြုခွင့် ရခဲ့ကြ သည်။ သူတို့သည် လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအတွက်အခန်းကဏ္ဍကို အောင်မြင်စွာစည်းရုံး မဲဆွယ်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်သော စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးခြင်းဟုခေါ်သည့် လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်တွင် သီးခြားခွဲထုတ်၍မရသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းအချက်အလက်ကိုပြည်သူသို့ထုတ်ဖော်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ သည် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းကိုဖြစ်မြောက်စေသည့် ကိန်းဂဏန်းများ ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုသောအချက်ကို သေချာ စေရမည်ဟုတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
လွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အခန်းကဏ္ဍကို ဆောင်ရွက်သည့်အုပ်စုများတွင် အင်ဒိုနီးရှား လွတ်လပ်သော သစ်တောရေးရာစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ယက် JPIK ပါဝင်ခဲ့သည်။ JPIK အဖွဲ့ဝင်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနှံ့ အဖွဲ့ပေါင်း ၆ဝ ကျော်နှင့် တစ်ဦးချင်း အဖွဲ့ဝင် ၃ဝဝ ကျော်ပါဝင်ပါသည်။
လိုင်ဘေးရီးယား။ လိုင်ဘေးရီးယား၏ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြား VPA လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ခြားနားရခြင်း မှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများရှိခြင်းနှင့် ၎င်းတို့မှ ရွေးကောက်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် VPA ဦးဆောင်ကော်မတီ၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒေသခံအဖွဲ့များကွန်ယက်ဖြစ်သည့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအား ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် ၂ဝဝ၉ VPA ဆွေးနွေးပွဲများစတင်သည့်အခါ အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေး ထားသည့် ရပ်ရွာအဆင့်ပါဝင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း များရှိနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် VPA တွင်ဒေသခံ ပြည်သူလူထုကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ပါဝင်ရေးကို ဒေသတွင်းရေဒီယိုတွင် FLEGT အကြောင်း များကို ဒေသခံဘာသာစကားဖြင့် သတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အားပေးခဲ့သည်။
ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ၇ ယောက်နှင့် ရပ်ရွာအစပျိုးအစီအစဉ်များဖောင်းဒေးရှင်း (Foundation for Community Initiative) နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (Sustainable Development Institute) ကဲ့သို့သော အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် ၄ ယောက်တို့သည် လိုင်ဘေးရီးယား VPA ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွင် ကိုယ်စားပြုခွင့်မရ သော်လည်း အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့များအတွက် နေရာ တစ်နေရာရပြီး သူတို့သည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏ အမြင်များကို ထုတ်ဖော်ခွင့်ရခဲ့သည်။
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့များသည် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတန်းတူရပိုင်ခွင့်အပါအဝင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို အခွင့်အရေး အသစ်များရရှိစေသည့် ဥပဒေပြုရေးတွင်အရေးကြီးသည့်ကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်ဘက် လူမှုရေး အဖွဲ့များကVPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ပွဲများတွင် ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကို မထုတ်ပြန်မီ အထိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ ၏အခွင့်အရေးများ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေအသစ် အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းကိုအချိန်ဆွဲထားခဲ့ပါသည်။ ဤဥပဒေမျိုးသည်အာဖရိကတွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ VPA တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
VPA မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း။